Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Siyasadii Reer Galbeedka Oo Guud ahaanba Nidaam-diidku la wareegayo Kadibna Maqluubka loo rogayo
Siyasadii Reer Galbeedka Oo Guud ahaanba Nidaam-diidku la wareegayo Kadibna Maqluubka loo rogayo
Dec 08, 2016 ANALYSIS, SOMALI NEWS 0
Jabkii Axaddii, 4tii Disembar ee Ra’iisal Wasaaraha Talyaaniga Matteo Renzi iyo istiqaalladdiisii ku xigtay, waxay xasuusinayaan, hagoogtii David Cameron uga dhacday guushii Brexit ee Britain.
Laakiin waa dunida reer Galbeedka oo idil midda lagu arkay, sannadka 2016ka, duufaanta nidaam-diidka ah (Anti Establishment), ee hoggaankii sare wada xaaqday, iyada oo beenisay dhammaan wixii saadaal ahaa ee la samaynayay.
assgeeagaSawirka astaanta u noqday is-baddelkaasna waa midka Baraha Bulshada qabsaday ee Shirkii argagixisada iyo soo galootiga Yurub ee 25kii April ka dhacay Hannover, dalka Jarmalka. Halkaas oo ay ka muuqdaan, iyaga oo wada jira, Renzi, Cameron, Merkel iyo Madaxweynayaasha Maraykanka iyo Faransiiska, Obama iyo Hollande
Marka la gaadho May 2017ka, Angela Merkel oo qur ah ayaa ka soo hari doonta,iyadoon waliba la hubin natiijada ka soo bixi doonta, codbixinta Septembar ugali doono Jarmalku.
Duufaantu waxay markii hore ka soo bilaabatay Bariga, halkaas oo xukuumadda qaran-doonka ah (National Populist) ee Hungary ee Viktor Orban, ku soo biirtay, Oktobar 2015kii, guusha xisbiga PiP “Law & Justice Party”, Muxaafidka-xagjirka ah (Ultra Conservative) ee Poland.
Dalka Spain: dalku doorasho ayuu galay, 20kii Disembar 2015, wuxuuna riday Xukuumaddii muxaafidka ahayd ee Ra’iisal Wasaare Mariano Rajoy, oo fadeexado iyo musuqmaasuq hareeyeen, laakiin wax dhaama la waayay.
Xaalkuna isma baddelin, walow codbixin 2aad la sameeyay 26kii Juun, xal la’aantii siyaasadeedna waxay markii dambe dhashay xukuumad laga tira badanyahay oo taag daran, oo Rajoy qudhiisu hoggaaminayo. Halka Xisbigii Hantiwadaagga gudihiisa ka dagaallamay, kaas oo soo jiiday in uu xilka isaga casilo hoggaamiyihii Pedro Sanchez.
cameron resign 150x150United Kingdom: David Cameron wuxuu ku dhawaaqay Afti looga baxayo Yurub isaga oo aaminsanaa in uu ka guulaysan doono xubnaha Yurub-diidka ah (Eurosceptics) ee xisbigiisa, sidaasna ku aamusiin doono. Laakiin 23kii Juun waa looga guulaystay sharadkii uu galay, wuuna is casilay, isaga oo dalka galiyay xaalad hubaal la’aan ku dheehantahay, qaabkii iyo xilliyadii looga bixi lahaa Midowga Yurub.
Dalka Austria: Doorashooyinkii Madaxweyne-nimada ee 24kii April waxay daadufiyeen, markii u horreysay, xisbiyadii “Social Democrats” iyo “Popupar”ka ee ka dhex muuqday saaxadda siyaasadda, wixii ka dambeeyay dagaalkii 2aad. Kuwaas oo musharrixiintoodii dhaafi kari waayeen, si bahdilaadi ku jirto, 11%, codadkii la qaaday.
Waxaa goobta ku hardamay Xisbiga “Greens” ee Alexander Van Der Bellen iyo midka “Liberty” ee midigta fog ee soo galooti-nacaybka ah ee Norbert Hofer. Markii hore Van Der Bellen ayaa guulaystay.
Laakiin codeynta oo idil ayaa la nasakhay, arrimo nadaamka la xiriira dartood, wuxuuse si rasmi ah u guulaystay Axaddii, 4tii Disembar, garbakii midigta fogna waa laga adkaaday, laakiin wax ka adkaaday waa siyaasi dibadda ka jooga hannaankii “Traditional”ka ahaa ee la yaqaannay.
Hollande 150x150Dalka Faransa: Madaxweyne Hollande wuxuu 1dii Disembar ku dhawaaqay in uusan isu taagi doonin xilka mar kale, isaga oo garwaaqsaday kala go’naanta xisbigiisa iyo ra’yiga dadweynuhu ka qabaan. Waxaa ka hor yimid isla waayihii u hiilliyay sannadkii 2012kii, ee diidmadii dadku uga soo hor jeesteen ninkii isaga ka horreeyay oo ahaa Nicolas Sarkozy.
Waayahaas oo hadda isaga ku soo foororsaday, mar ay la soo gudboonaadeen xilliyo adag oo weerarro argagixiso iyo hoos u dhac dhaqaale wata. Doorashooyinka dhici doona 23ka April iyo 7da May waxay meesha ka saari doonaan Hollande, laakiin saadashu waa furnaan doontaa:
Xisbiyada Midigta caadiga ah waxay soo sharrixi doonaan Francois Fillon, kuwa “Populist”-kana Marine Le Pen, hoggaamiyaha “National Front”, Hantiwadaaggu wuxuu sugi doonaa tartanka Jenaayo. Halka Wasiirkii hore ee Maaliyadda Emmanuel Macron, isku deyi doono in uu dibadda ka tartamo.
Dalka Holland: Faransiiska ka sokow waxaa la eegayaa xitaa doorashooyinka soo socda ee 15ka March ka qabsoomi doona dalka Holland, halkaas oo aragtida Midigta Yurub-diidka iyo soo galooti-nacaybka uu matalo Xisbiga PVV ee Geert Wilders.
Bishii April, natiijadii Aftidii lagu diiday heshiiskii Midowga Yurub iyo Ucraine, in kasta oo Xukuumaddu ka hadashay, waxay ahayd calaamad an la dhayalsan Karin.
United States: Duufaanta “Anti Establishment” waxay si xawli ah ku dul martay xitaa Maraykanka oo Donald Trump, markii hore ku adkaaday Jamhuuriga guduhiisa, markii dambana Aqalka Cad. Xiltaa isaga oo la kulmay diidmo ka soo wajahaysay gudaha xisbigiisa iyo waliba guud ahaan warbaahinta kala duwan ee gudaha iyo dibadda dalka.
Angela Merkel Barack Oba 438759 150x150Dalka Jarmalka: Angela Merkel waxay mar hore ku dhawaaqday musharrax-nimadeeda markii 4aad, doorashooyinka dhici doona Septembar 2017ka. Obama, booqashadiisii u dambaysay Yurub, wuxuu u muuqday mid ku wareejiyay iyada, hoggaankii reer Galbeedka Dimuqraadiga ah, laakiin iyada qudheeda, dariiqu uma sahlana.
Codbixintii 4tii Septembar ee gobollada, Gobolkeedii “Meclanberg Pomerania” waxaa kaalinta 2aad ka galay Xisbiga AFD ee soo galooti nacaybka ah, kaas oo helay in ka badan 20%. Halka midka Ra’iisal Wasaare Merkel helay 19%, arrimaha soo galootiguna waxay ka dhaliyeen, gudaha xisbigeeda, dodo fara badan
Madaxweynayaasha Maraykanka, Midowga Yurub, Nicolas Sarkozy, Xisbiyada Midigta
Breaking:- Suldan Wabar oo Soo Gaadhay Deegaamada Galbeedka Somaliland ee Dhinaca Itoobiya iyo Ciidamada Somaliland oo Heegan La Galiyay Caasimadaha Dunida qaarkood oo ku heshiiyay inay Mamnuucaan Babuurta Naaftada ku socota
Sawirro:- Wasiirka Difaaca Soomaaliya Oo La Kulmay Saraakiil Ka Tirsan Midowga...